Safal Khabar - प्रधानमन्त्रीलाई देखाउँदै मनोज पाण्डेको अर्काे धन्दा
शनिबार, ११ माघ २०७६ (Saturday, 25 January, 2020)
प्रधानमन्त्री ओलीको तस्वीर समेटिएको पुस्तक प्रकाशन गरिदैं, सोल्टीमा भब्य भोजको तयारी
बुधबार, ०१ साउन २०७६, ०९ : ४५
काठमाडौं । ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रम चलाउँदै आएका मनोज पाण्डेको थप अर्काे धन्दा खुलेको छ । सिंहदरबारभित्रै डकुमेन्ट्रीका नाममा चर्काे चन्दा आतंक मञ्चाउँदै आएका पाण्डेले अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तस्वीरहरु अंकित पुस्तक बजारमा ल्याउन लागेका छन् । यसको आजै प्रधानमन्त्री ओलीकै हातबाट उनले विमोचन गराउँदैछन् ।
राजधानीको कालिमाटी सोल्टीमोडस्थित पाँचतारे होटल सोल्टी होटेलमा उनले एक भब्य कार्यक्रमका साथ प्रधानमन्त्रीको तस्वीर अंकित पुस्तकको विमोचन गराउन लागेका हुन् । यो पुस्तक प्रकाशनका लागि पनि उनले ब्यापारीहरुसँग ठूलै रकम उठाएको चर्चा अहिले प्रधानमन्त्रीकै निजि सचिवालय समेतमा हुन थालेको छ ।
त्यसो त उनको नीजि कम्पनीले सञ्चालन गदै आएको जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रमको आजै वर्ष दिन पुगेको छ । वर्ष दिन पुगेको अवसर पारेर उनले सोल्टीमा भब्य भोज सहितको कार्यक्रम गर्न लागेका हुन् । कार्यक्रमका लागि करिव ५ सय आसपासमा मान्छेहरुलाई आज साझ सोल्टी होटलमा निम्ताइएको छ ।
यस अगाडी कार्यक्रम शुरु गर्ने बेलामा पनि उनले सोल्टी होटलमै कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । कार्यक्रमको खर्च ब्यवस्थापन उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै भजाएर विभिन्न ब्यापारिक समुहबाट गराउन लगाएको स्रोतले बताएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई महिमागानमा लिप्त बनाउने, आफ्नै नातेदार मामा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई कतिपय ब्यापारीहरुसँग फोन नै समेत गराउन लगाउने र आफु र आफनो नीजि कम्पनीको लाभका लागि गोरखधन्दा चलाउने काममा अहिले पाण्डे लागेका छन् ।
पाण्डेले जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रमलाई देखाएरै सिंहदरवारका हरेक जसो मन्त्रालयमा चन्दा आंतक नै मच्चाएको समाचार ' सिंहदरबारभित्रै मनोज पाण्डेको ‘चन्दा’ आतंक ! ' गत हप्तामात्रै पनि सफलखबरले लेखेको थियो ।
न्यूनतम पारिश्रमिक पनि दिदैनन्
सरकारले श्रमजीवि पत्रकारको पारिश्रमिक २४ हजार ५ सय तोकेको छ । सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले उक्त पारिश्रमिक नदिने सञ्चार सस्थालाई कारवाही गर्ने, सूचना विभागको पास समेत नदिने गरी कडाई गरिरहेका छन् । तर सरकारकै कार्यक्रमको प्रचार र प्रभावकारी सञ्चार गराउन र जनतासँग सरकारलाई जोड्नका लागि सञ्चालनमा आएको जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम चलाउँदै आएका पाण्डेले भने आफ्नै कार्यक्रम तयार पार्ने टिमका कतिपयलाई न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नदिएको स्रोतले बताएको छ ।
उनले आफ्नो उक्त कार्यक्रम उत्पादन टिममा रात दिन मेहनत गर्नेहरुलाई न्यून पारिश्रमिकका काम लगाउँदै आएका छन् । जसकाकारण कार्यक्रम उत्पदन गर्न शुरुवातमा खटिएका कतिपय कर्मचारीले उनको साथ छोडेर अहिले अन्यत्र हिडिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार रिमालले पाण्डेलाई पहिले देखि नै डकुमेन्टीहरुमा जोडने, आइएनजिओहरुमा जोडाईदिने र मनग्गे पैसा कमाउने बाटोमा लगाएका थिए । रिमाल मजदुर संगठन जिफन्टको अध्यक्ष हुँदा पाण्डेलाई आइएलओसँग जोडाउने काम रिमालले नै गरिदिएका थिए ।
अन्तराष्टिय श्रम संगठन आइएलओको स्पोन्सरमा जिफन्टले महँगो दररेटमा रिमालले पहिले पनि नेपाल टेलिभिजनमा श्रम र सिर्जना कार्यक्रम चलाउन पाण्डेलाई नै दिएका थिए । अनामगनरस्थित युनियन हाउस पूरै भाडामा लिएर पाण्डेले श्रीमतिलाई उक्त कारोवार जिम्मा लगाएका छन भने आफु रिमालसँग जोडिएर सिंहदरबारभित्रैको गोरखधन्दामा लागेका छन् ।
कहाँबाट आयो त्यत्रो पैसा ?
पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको तस्वीर अंकित पुस्तक प्रकाशन, सोल्टी होटलमा भब्य भोजसहितको कार्यक्रम देखि करोडौ लगानीमा अनलाइन सञ्चालन गर्नका लागि कहाँबाट पैसा आयो भन्ने अहिले नेकपाभित्र वहस शुरु भएको छ ।
पाण्डेकै ब्यवस्थापनमा अहिले दरवारमार्गबाट रामेश्वर बोहोरालाई सम्पादक बनाएर नयाँ अनलाइन सञ्चालनमा आउँदैछ । सिधै प्रधानमन्त्रीलाई देखाउने र प्रत्यक्ष रुपमा प्रमुख सल्लाहकार रिमाल र पाण्डे जोडिएर उक्त अनलाइन आउन लागेको हो । आजैबाट उक्त अनलाइनमा जोडिन चाहेका पत्रकारहरुले दरवारमार्गबाट काम समेत शुरु गर्न थालेका छन् ।
महँगा होटलमा कार्यक्रम गर्ने देखि करोडौंको लगानीमा अनलाइन समेत सञ्चालनमा ल्याउनका लागि यो टोलीले ब्यापारी दिपक मल्होत्रासँग पनि डिल गरेको छ । रिमाल र पाण्डेको नयाँ अनलाइनमा मल्होत्राले लगानी गर्ने समेत खुलेको छ । अन्य ब्यापारीहरुलाई पनि रिमाल र पाण्डेले लगानीका लागि दबाब बढाईरहेको स्रोतले बतायो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई देखाएर मनग्गे आम्दानी गर्ने सूरका साथ अहिले रिमाल र पाण्डेले मिलेरै काम गरिरहेको स्रोतको भनाई छ ।
१. एमसिसीमा भएका प्रावधान संशोधन हुनुपर्छ : गृहमन्त्री थापा
२. आर्थिक समृद्धिको मुद्दामा सबै राजनीतिक दल एक हुनुपर्छः मन्त्री भट्टराई
३. खुशी हुँदै फर्कनुभयो राजकुमारी एस्ट्रिड
४. ‘मुलुकलाई शक्ति राष्ट्रको क्रिडास्थल बन्न दिँदैनौँ’
५. सञ्चारविहीन हुँदा लोकसेवा आयोगको अनलाइन फर्म भर्न पाएनन्
६. उपराष्ट्रपति पुन क्रुजमा सरर
७. घुस लिएको अभियोगमा सबइञ्जिनीयर पक्राउ
८. नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटिएको पुष्टि
९. एमसिसी प्रस्ताव राष्ट्रिय हितअनुसार अघि बढ्नेछ : अध्यक्ष प्रचण्ड
२. अग्निले नेम्वाङलाई त्यसरी किन भेटे सिंहदरबारमा ?
३. महन्थ ठाकुरलाई राष्ट्रपतिद्वारा सपथ खुवाउने तयारी
४. दुई करोड ऋण तिर्न नसक्दा आत्महत्या
५. माग्ने बुढाले गरे आफूलाई कारबाही गर्ने ट्राफिक प्रहरीको प्रशंसा
६. शीतल निवासले मर्यादा भुलेपछि के हुँदैछ नेकपामा ?
७. मनोजले सुरु गरे चितवनमा पहिलो पटक स्ट्रबेरी खेती